Kedu ihe kpatara Bogota ji bụrụ Obodo nke Nightlife International na Nọvemba?
Home » Na-agbasa News Travel » Kedu ihe kpatara Bogota ji bụrụ Obodo nke Nightlife International na Nọvemba?
Obodo Bogotá dị na Colombia ga-anabata 5th International Nightlife Congress na 4th Golden Moon Awards na November 14th yana ngosi nke ExpoBar nke Colombia.
Obodo Bogotá dị na Colombia ga-anabata ndị 5thNzukọ Nightlife International na 4th Onyinye ọla edo na November 14th yana ngosi nke ExpoBar nke Colombia. N’izuụka gara aga na Ibiza, Onye isi oche nke International Nightlife Association (INA), José Luis Benítezand onye isi oche nke Nightlife Association of Colombia (ASOBARES), Camilo Ospina kwetara imekọ ihe ọnụ. Dị ka ị nwere ike ịma, INA na-eme nnọkọ nzuko mba ụwa kwa afọ na ememme onyinye ma kpebie ime ememme mbipụta nke afọ a na ndị 5th mbipụta nke ExpoBar Fair. ExpoBar bu ihe omume ntụrụndụ kacha mkpa nke Colombia na ihe karịrị ndị bịara 3.000 tinyere ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ, ndị ọrụ, ndị isi na ndị na-akwado ha.
N'ime nzukọ ahụ ekwuru na mbụ n'etiti ndị nnọchi anya abụọ ahụ, ekwenyekwara ịbanye ASOBARES Colombia (Colombia Nightlife Association) na International Nightlife Association, na-ewusi njikọ mba ụwa ike. Ugbu a, INA nwere nnọchite anya ụwa niile na mba 8 (United States, Spain, France, Italy, Belgium, United Arab Emirates, Mexico na Colombia) na njikọta na-abịanụ nke Japan na India, na-agbakwunye ihe karịrị ụlọ 13,000. Na nnọchite nke International Nightlife Association, anyị ga-achọ ịnabata ASOBARES Colombia dị ka onye ọhụụ na-arụsi ọrụ ike ma na-ekele gị maka njikere gị na ile ọbịa na-ekwe ka INA jikọtara ọnụ na-eme ememme ụwa anyị na Ngosipụta kwa afọ.
The 5th Congress Nightlife Congress ga-edozi isi okwu dịka nchekwa, mmetọ mkpọtụ, njem nlegharị egwu, ịdị mma na ịdị mma, ha niile na ndị ọkà okwu ama ama n'ụwa niile, bụ ndị ọbịa nke Expobar, ndị ọbịa nke mmemme niile. Isi okwu nke International Congress ga-abụ "Triple Excellence in Nightlife", ụdị ịdị mma atọ nke INA nyere ebe ndị a na klọb ndị ahụ na-ezute usoro chọrọ n'ihe gbasara nchekwa, mkpuchi na ogo ọrụ mgbe elechara anya. . Okwesiri ighota na Bogotá, onye isi obodo nke ihe omume anyi na-esote, enyela "Sello Seguro", akwukwo asambodo nke ndi obodo nyere maka ebe ndi mmadu choro choro ma gha ebugharia na nzuko anyi.
N’oge mgbede nke Nọvemba 14th , International Nightlife Associationwill ga-ewepụta ndepụta nke "Kachasị Klọb Kasị Mma nke 100wa 2018" na-esote mmechi mmemme mmemme nke Expobar nke ndị ASOBARES na ndị ọrụ njegharị nke Bogotá kwadoro. Isi obodo Colombia ga-abụ isi nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndụ abalị site na ịtọghe aha ndepụta nke ụlọ ịgba egwu abalị kachasị mkpa n'ụwa, gụnyere "World's Best Club 2018", ọnọdụ nke Ushuaïa Ibiza dị ugbu a. Dị ka ọ dị taa, ka ndị aga-abanye na aha a dị ebube enwere ngụkọta nke klọb 195 sitere na mba 33 dị iche iche. Nhọrọ dị ugbu a rue August 30th. Maka oge ahụ, United States nwere klọb họpụtara mmadụ iri atọ na anọ, Spain 34, Italy 26, UK 15 na Brazil nwere mmadụ 14 n’otu n’otu. Ndị a bụ mba ndị na-achịkọta ndị kachasị n'asọmpi n'otu mpaghara ha ka ha nweta onyinye nrite ọla edo maka '' Kachasị Klọb Kacha Mma Worldwa '. Ebe ndị a na-ahọpụta 195 maka ụbọchị dị iche iche dịka Arab, Singapore, Sweden, Czech Republic, Russia, Malta, Japan, Argentina, na nso nso a Colombia na ndị ọzọ.
Thezọ ịtụ vootu maka aha ndị mejupụtara 70% nke votu site na ndị ọkachamara ọkachamara (nke ndị otu ọkachamara metụtara ụwa nke abalị na ndị njikwa ụdị ihe ọverageụverageụ, ndị isi si ụwa njem na ndị otu Association) ebe 30% na-ewu ewu site na netwọk mmekọrịta nke ga-ebido ịtụ vootu na Septemba 14th, votu nke ga-emeghe ruo mgbe November 4, nke ahụ bụ, ruo ụbọchị 10 tupu ihe omume na Bogotá, Colombia.
Ndepụta a na ndepụta a nwere mgbakwunye nke mmemme mmemme nke ebe a na-eme n'ime afọ ahụ, ọtụtụ akụkụ dị ka ọnụọgụ ndị ahịa, usoro nchekwa, ọrụ ndị VIP nyere, ntinye akwụkwọ n'ịntanetị, omume ọma nke arụmọrụ, natara nyocha, ịkpa ike na ntinye aka na United Nations ebumnobi dị ka nkwanye ùgwù maka gburugburu ebe obibi, nha anya nwoke na nwanyị na ọnọdụ ọrụ.
Dabere na Joaquim Boadas de Quintana, odeakwụkwọ ukwu nke International Nightlife Association, “… Site na mmemme a, anyị chọrọ ịkwalite ma kpalie ebe obibi abalị niile sitere n'akụkụ ụwa niile ịsọrịta onwe anyị ma nweta ọkwa na aha ọma a ma nwee ike iduga ya, itinye ego n'ịdị mma n'akụkụ niile, akụrụngwa, ọrụ na nchekwa usoro ndị na-eme ka ha nwee asọmpi, mma na nchekwa, nke n'aka nke ya ga-ewetara ndị ọrụ uru ọ ga - eme ka aha na ugwu dị elu nke ngalaba ahụ, nke bụ ebumnuche anyị ".
Na-agagharị? Kedu obodo iri abụọ kachasị mma ibi na United States?
Ntinye aka Vietnamjet na Airbus Ink maka ụgbọ elu 50 A321neo na Farnborough Airshow